Ebee ga -ahụ oge niile nke South Park na Spanish | Androidsis
Ị na -anụ Ehee, ha gburu ndị nne nne Kenny ... ị maara na ọ bụ maka usoro South Park, usoro nke na -ebu Oge 24 na ikuku na -eme ngụkọta nke akụkọ 310 (na Septemba 2021) yana na dịka akụkọ kacha ọhụrụ si dị, etinyela inshọransị opekata mpe 6 ọzọ, ruo 30, yabụ ndị hụrụ usoro a n'anya.
South Park bụ usoro ihe nkiri maka ndị okenye emepụtara na 1997 maka ọwa Comedy Central site na Trey Parker na Matt Stone, usoro ezubere maka ndị na -ege ntị toro eto ma jiri satirizing ọha America, ihe ndị dị ugbu a na ọdịbendị nwere oke ọchị, n'agbanyeghị na ha dabara nke ọma. omenala. Mana Ebee ka ịhụ oge niile nke South Park?
Ugbu a, anyị nwere ike ịnụ ụtọ South Park na Spain site na ụzọ 4: Video Amazon Prime, Netflix, Pluto y Comedy Central.
1 Oge ole ka South Park nwere
2 Video Amazon Prime
4 TV Pluto
6 Mpaghara South Park kacha mma
Oge ole ka South Park nwere
Kemgbe 1997, South Park echefughị ​​oge ọhụhụ na kwa afọ, oge ọhụrụ amalitela. Oge 24, n'oge a na -ebipụta edemede a (Septemba 2021) nwere akụkụ abụọ, yabụ na ụfọdụ mgbasa ozi anaghị ele ya anya dị ka ihe omume pụrụ iche.
Nke a bụ n'ihi na coronavirus kpọnwụrụ ihe niile a na -ahụ anya na gburugburu ụwa na South Park sokwa. Mpaghara nke bụ akụkụ nke oge nọmba 24 bụ: Panedemic Pụrụ Iche y Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa South ParQ.
2 18 Si Mba
3 17 Si Mba
4 17 Si Mba
5 14 Si Mba
6 17 Si Mba
7 15 Si Mba
8 14 Si Mba
9 14 Si Mba
10 14 Si Mba
11 14 Si Mba
12 14 Si Mba
13 14 Si Mba
14 14 Si Mba
15 14 Si Mba
16 14 Si Mba
17 10 Si Mba
18 10 Si Mba
19 10 Si Mba
24 10 Mba Mba
Igwe vidiyo vidiyo na -enuba nke Amazon, gụnyere ụgwọ Amazon Prime kwa afọ, na -enye ndị ahịa ya niile ohere oge mbụ 23 nke usoro isiokwu a (Septemba 2021), na -eme ka ọ bụrụ nhọrọ kacha mma ịnụ ụtọ usoro a dị egwu nke na -ekerịta ime ihe ike na asụsụ rụrụ arụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ.
Oge 24, nke ikpeazụ na nke kachasị ọhụrụ (Septemba 2021) naanị ugbu a nwere usoro ihe nkiri abụọ emere na Septemba 30, 2020 na Machị 10 de 2021, akụkụ abụọ pụrụ iche akpọrọ Panedemic Pụrụ Iche y Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa South ParQ.
Ọrịa coronavirus mebiri atụmatụ ụlọ ọrụ mmepụta, dị ka n'ọtụtụ usoro. N'oge a, naanị akụkụ abụọ nke oge nke atọ Ha na -elekwasị anya na ọrịa coronavirus.
Ihe niile yiri ka ọ na-egosi nke ahụ Oge South Park 24 ga -agbatị ihe karịrị afọ abụọ kama afọ a na -emebu, ọ bụ ezie na isi mmalite ndị ọzọ na -ekwu na ọ bụ naanị akụkụ abụọ ahụ mejupụtara yana na ha ga -eji nọmba oge 25 laghachi na 2022.
N'adịghị ka nyiwe ndị ọzọ dị ka Disney, ebe anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ usoro naanị na Bekee na -enweghị ndepụta okwu Spanish, na Amazon Prime anyị nwere oge 23 nke South Park. nwere ọdịyo na Bekee na Spanish yana ndepụta okwu n'asụsụ abụọ ahụ.
Isi ikpo okwu na nkwanye vidiyo vidiyo Netflix, na -eme ka ndị debanyere aha ya dị oge: 1, 20, 21, 22 na 23. Agbanyeghị, n'agbanyeghị enweghị oge ndị ọzọ, ọ na -enye anyị nchịkọta na akụkụ kacha mma nke oge niile, gụnyere akụkụ nke oge a na -enweta anyị.
Ihe ngosi ndị so na ngalaba ahụ Akụkụ kacha mma nke South Park bụ:
Chinpokomon Oge 3
Scott Ternorman ga -anwụ Oge 5
Ihe Nri Na -egosi Oge 5
Kenny anwụ anwụ Oge 5
Nlaghachi nke òtù ụmụnna nke mgbanaka ahụ n'ụlọ elu abụọ Oge 6
Oké nkume Ndị Kraịst Oge 7
Ezigbo ụlọ Oge 7
Oge ọma na egbe Oge 8
AWESOM-O Oge 8
Ala azụ Oge 8
Krismas nke anụ ọhịa Oge 8
Enyi kacha mma ruo mgbe ebighị ebi Oge 9
Ọnwụ Eric Cartman Oge 9
Tọrọ atọ n'ime kaboodu Oge 9
Mee ka ịhụnanya ghara ịbụ agha Oge 10
Imaginationland I na nke Abụọ Oge 10
Obodo Villa Margarita Oge 13
Osisi azụ Oge 13
Ịgba egwu na Smurfs Oge 13
Usoro niile dị na Netflix dị na ọdịyo Spanish na mgbakwunye na Bekee, German na French. Ndepụta okwu na -adịkwa n'asụsụ Spanish, Arabic, French, Bekee na Romanian.
TV Pluto bụ vidiyo vidiyo na -enuba ebe anyị nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ọwa kpamkpam n'efu. N'ime ọwa ndị a bụ Pluto Comedia. Site na ọwa a, anyị nwere oge iri na atọ nke South Park n'aka anyị.
N'ịbụ onye telivishọn, a na -edobe ya na mmemme a kapịrị ọnụ, yabụ anyị nwere ike ịnweta naanị akụkụ ndị a mgbe Pluto TV na -agbasa ha n'elu ikpo okwu.
Ka usoro ihe omume na -agbanwe kwa ọnwa, ihe kachasị mma ị nwere ike ime bụ ịwụnye ngwa na lelee mgbe enyere ya. N'ịbụ onye nweere onwe ya kpamkpam, ị gaghị efu ihe ọ bụla site na ịnwale ya.
Pluto TV - Ihe nkiri na usoro
Comedy Central nwere ikike South Park kemgbe oge mbụ ya. Nke a bụ ọwa nkeonwe yabụ na ịnweghị ike ịbanye na antenna mana ị ga -akwụ ụgwọ iji nweta ya, n'ozuzu site na ngwugwu ọwa.
Ịbụ onye nwe ikike, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe omume ka ha na -azụ na Spain, ị nweghị nhọrọ ọzọ karịa ịgafe ọwa a. Ma ọ bụ chere ka oge gwụchaa ka ha dị site na Amazon Prime Video.
Ebe anyị bụ ọwa telivishọn, anyị enweghị ike ilele ihe nkiri oge ọ bụla na ebe ọ bụla anyị chọrọ, mana kama anyị ga -edo onwe anyị n'okpuru mmemme nke ngosipụta.
Mpaghara South Park kacha mma
N'ịbụ otu n'ime usoro kachasị ogologo na telivishọn, South Park enweela ọtụtụ oge ya niilePisodios nke ị gaghị agbaghara ma ọ bụ nke ị kwesịrị icheta.
Lee, anyị gosiri gị ihe ngosi South Park kacha mma, ndepụta nke ndị na -eso usoro a mere:
1 × 01 - Cartman nwere nyocha gbasara ike.
2 × 04 - Onye hụrụ ọkụkọ n'anya.
4 × 09 - I nwere ike iji mkpịsị aka gị mee ihe.
5 × 04 - Scott Tenorman ga -anwụ
5 × 14 - Ihe Ngosi Butter
6 × 07 - The Simpsons emeela ya
8 × 01 - Ezi oge nwere egbe
8 × 11 - Ịchụ nta maka ndị na -ege ntị
9 × 06 - Ọnwụ nke Eric Cartman
9 × 12 - tọrọ atọ n'ime kaboodu
10 × 08 - Mee Ịhụnanya, Ọ bụghị Warcraft
10 × 11 - Hell na Ụwa 2006
11 × 06 - D -Yikes!
11 × 10-11-12-Ebe echiche
12 × 02 - Ọhụrụ Britney
12 × 08 - Nsogbu nke China
13 × 05 - Azụ Azụ
14 × 03 - Ọkụkọ eghere eghe ọgwụ
14 × 04 - Ị nwere ndị enyi 0
15 × 05 - Ndị otu egwuregwu ụmụaka
20 × 01-02-03-Kọọ akụkọ na mpaghara 3 nwere aha dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ebe ị ga -elele oge niile nke South Park na Spanish
Ha dị mma…. A na m ekwupụta na m bụ onye na -akwado Cartman na -enweghị atụ…. Ọ bụ ihe ọ joyụ na ha niile etinyela ha na Amazon Prime, ịhụ ka ọ dị, n'ihi na ndị m ebudatara dị egwu…. oge ịtụle ha ...
ColorOS 12 bụ nke gọọmentị ugbu a: akụkọ, ekwentị dakọtara na mgbe ọ ga -abata na Europe